प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेले आधा घण्टामै भिषा पाउँछन् : महानिर्देशक न्यौपाने — Motivate News
Posted on November 10, 2016 by motivate news
काठमाडौं – विदेशीलाई नेपालमा विभिन्न प्रयोजनको लागि आउन अनुमति (भिषा) दिने निकाय हो अध्यागमन विभाग । त्यही विभागलाई सफल रुपमा हाँकिरहेका छन् विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले । २०४७ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सेवा प्रारम्भ गरेका न्यौपानेले काठमाडौं, मोरङ, सुनसरी र पाल्पामा स्थानीय विकास अधिकारीको रुपमा रहेर आफ्नो कुशल प्रशासकको भूमिका निभाइसकेका छन् । त्यस्तै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर समेत काम गरिसकेका छन् ।
आफ्नो काममा अडिग उनी काठमाडौंमा स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा फर्पिङबाट दक्षिणकाली, कुलेखानी हुँदै हेटौडा जाने बाटाको ट्रयाक खोलेर त्यस आसपासका जनतालाई सडक संजालमा जोड्न सफल भएका थिए । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेलामा उनलाई काम गर्न गाह्रो थियो, यता राजाको प्रत्यक्ष शासन, उता माओवादीको धम्की तर उनी यसबाट कति पनि विचलित नभइकन काम गरिरहेका थिए ।
विभिन्न क्षेत्रको अनुभव सम्हाल्दै न्यौपाने दुई वर्षअघि नेपालको अध्यागमन विभागको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे । विश्वभरबाट नेपाल आउनलाई भिषा लगाउनेको ठुलो भीड थियो उनी प्रवेश गर्दाको समयमा । नेपालमा विभिन्न प्रयोजनको लागि आउने विदेशीहरुलाई अनुमति लिन आउनेहरुले दिनभर लाइन बसेर आफ्नो पालो पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो । पर्यटन भिषामा होस् या व्यापारी भिषामा होस, अथवा विद्यार्थी भिषामा नै किन नहोस् जो कोहीले पनि बिहानैदेखि लाइन बसेर आफ्नो पालो पर्खिन पथ्र्यो ।
त्यस्तै बिहान भिषा लगाउनको लागि आवेदन भरेपछि बेलुका मात्र सेवाग्राहीले राहादानी फिर्ता पाउँथे । उनलाई यस्ता खालका समस्याले पिरोल्यो । यसपछि उनले एउटा अठोट गरे, ‘म यहाँ रहँदासम्म जसरी पनि यस्ता खालका समस्याको समाधान गरेरै छोड्छु ।’ उनको यो अठोट एक वर्ष नपुग्दै पुरा भयो । अहिले यस्ता समस्याहरुको अन्त्य भएको छ । सेवा लिनेहरु बढेका छन् भने सेवा छिटो र छरितो भएको छ । जनशक्ति उहि हो, काम पनि त्यहि तर अहिले न त अध्यागमनमा लाइन देखिन्छ न त बिहानदेखि राहदानी छोडेर जान परेको छ । त्यति मात्रै होइन न्यौपाने अध्यागमनमा प्रवेश गर्दा नक्कली अध्यागमनको कर्मचारी बनेर सेवाग्राहीलाई ठग्ने गरेको पनि पाइन्थ्यो । तर अहिले यसरी सेवाग्राही ठगिएका छैनन् । उनी आएदेखि अध्यागमनमा सबै कर्मचारीलाई एउटै पोशाकको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
आखिर कसरी यो सब कुरा सम्भव भयो ? अध्यागमनमा महानिर्देशक भएर आएको दुई वर्षमा कसरी भयो यी सवै समस्याको समाधान ? नेपालले पर्यटन वर्ष २०१७ मनाउँदै छ, पर्यटकलाई के छन् त विशेष सुविधाहरु ? यी र यस्तै विषयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाई आइसकेपछि अध्यागमनमा त धेरै सुधार भयो नि, यो कसरी सम्भव भयो ?
यो मैले भन्ने कुरा होइन । तपाईहरुले देख्ने र सेवाग्राहीले मनन गर्ने कुरा हो । म आएपछि अध्यागमनमा धेरै सुधारहरु भएका छन् । पहिला दिनभरिमा नसकिने काम अहिले केही समयमा नै सम्पन्न हुन्छन् । पहिला बाहिरसम्म सेवाग्राहीको लाइन देखिन्थ्यो भने अहिले लाइन नै छैन । सेवाग्राही घटेर यस्तो भएको होइन, सेवा लिनेहरुको संख्या बढेको छ, तर हामीले सुव्यवस्थित तरिकाले काम गरेको हुँदा यसो भएको हो । परिवर्तनको लागि यतिले मात्र पुग्दैन । पहिलेको भन्दा र भएको पक्कै हो तर पूर्ण रुपमा सुधार गर्नको लागि तिन ओटा कुरा आवश्यक पर्छ ।
पहिलो नीतिगत सुधार गर्नप¥यो । राम्रो नीति बन्यो भने अवश्य सेवामा सुधार हुन्छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको प्रविधिको विकास र विस्तार हो । भिषा प्रणालीलाई अत्याधुनिक सप्टवेर प्रयोग गरी सुरक्षित गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई हौसला दिन केही सेवा सुविधा थपेमा यसमा अझ प्रभावकारी ढंगले काम हुनसक्छ । हामीले जति छिटो प्रविधिको विकास गर्न सक्छौं त्यति नै अध्यागमनको काम प्रभावकारी हुन्छ ।। तेस्रो भनेको कर्मचारीलाई तालिम, सेवा सुविधा आदि, इत्यादि हो । मैले गरेको भनेको दुइवटा कुराको सुधार हो । पहिला हामीले प्रविधिमा सुधार ग¥यौं । र अर्को भनेको कर्मचारीलाई तालिम र सेवा सुविधामा केही थप गर्दा पहिलाको भन्दा सुधार भएको हो ।
नीतिगत तहमा के कस्ता सुधारहरु भए, नेपालको अध्यागमनले अझै फट्को मार्न सकेको छैन नि ?
नीतिगत तहमा अयोग्य अथवा सम्बन्धित क्षेत्रसँग जानकार नभएका कर्मचारीलाई अध्यागमनमा सरुवा गर्नु हुँदैन । त्यस्तै सरकारले अध्यागमन विभागलाई प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । अध्यागमनका योजनाहरु प्राथमिकतामा पर्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो । किनकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । अध्यागमन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नपर्नाले सरकारको प्राथमिकतामा परेन र सुधार हुन सकेन । त्यस्तै सबै किसिमले योग्य कर्मचारीलाई अध्यागमनमा ल्याउनुपर्छ । प्रविधिमा अबडेट कमचारीलाई राख्न सक्यो भने अझ व्यवस्थित अध्यागमन बन्छ ।
त्रिभुवन एयरपोर्टमा अटोमेटिक डोर सिस्टम लागू गर्ने कुरा के भइरहेको छ ?
काम भइरहेकै छ । जति हुनपर्ने हो ,त्यो चाँहि नभएको पक्कै हो । यसका विविध कारणहरु छन् । आर्थिक समस्याले मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यस्ता कामहरु ओझेलमा पर्छन् । मैले अघिपनि भनेँ जबसम्म कुनैपनि ठुला योजनाहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्दैनन् तवसम्म यस्ता आयोजनाहरु ओभेलमा पर्छन् । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका योजनाहरुमा कसैले चासो दिँदैन, सोधीखोजी गर्दैनन् मनपरी हुन्छ । अर्को कुरा भनेको नेपालमा भिषाको विज्ञ नै छैनन् । विज्ञ नहुँदा कसरी काम सम्पन्न गर्ने भनेर समस्या आउँदो रहेछ । वाहिरबाट विज्ञ ल्याउँदा पनि सुरक्षाको हिसावले खतरा हुन्छ । यस्ता विविध कारणले गर्दा त्रिभुवन एयरपोर्टको काममा ढिलाइ भएको छ ।
हाम्रो देशको अध्यागमन अन्य देशको अध्यागमनमा केही भिन्नता छ ?
नेपालको अध्यागमन र अन्य देशको अध्यागमनमा धेरै भिन्नता छ । नेपालमा भिषा लगाएर आउन सजिलो छ जान गाह्रो छ । विदेशमा भिषा लाग्न गाह्रो हुन्छ तर फर्किन सहज छ । नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरुको आगमन होस् भन्ने नीति छ । त्यही नीतिका कारण धेरै बिदेसीहरु नेपालमा आउँछन् तर फर्किन समस्या छ । यसरी नेपाल आएका हरुलाई फर्किदा केहि समस्या प¥या भने सिधै जेल जाने बाहेक कुनै विकल्प हुँदैन ।
विदेशीले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आउँदा कति समयमा भिषा पाउँछन् ?
विदेशीहरु साँच्चै नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएका हुन् भने केही समस्या हुँदैन, जो लगानी गर्ने बहानामा नेपाल आउँछन् उनीहरुलाई धेरै गाह्रो छ । जो साँच्चै लगानी गर्ने सोचका साथ नेपाल आएका छन् उनीहरुले प्रक्रिया पुरा गरेको आधा घण्टामा भिषा पाउँछन् ।
नेपालले सन् २०१७ लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ, यसमा अध्यागमनको भूमिका के रहन्छ ?
पर्यटन वर्ष २०१७ लाई सफल पार्न हामीले दिने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्छौं । पर्यटकलाई अध्यागमनबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा हामी कुनै कसर राख्दैनौं ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Tagged Immigration of Nepal, Kedar Neupane, अध्यागमन बिभाग, केदार न्यौपाने | Leaveareply